birta naxaas (ii) koloriin copper bir (ii) koloriin
(rnn) (digo yara) (rnn) (dd)
(sax ah) (xanh lá cay) (D) (la soco)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Fe + CuCl2 → Ku + FeCl2
Waa maxay xaaladda falcelinta Fe (birta) ay kula falgasho CuCl2 (naxaasta(ii) chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cu (naxaas) iyo FeCl2 (iron(ii) chloride)?
Ku-beddelashada Fe in kastoo CuCl2
Dhacdada ka dib Fe (birta) waxay la falgashaa CuCl2 (Copper(ii) chloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Fe + CuCl2 → Ku + FeCl2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee FeCl2 (copper(ii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeCl2 (iron(ii) chloride) alaab ahaan?
birta koloriin koloriin bir (ii, iii) oksaydh bir (ii) koloriin biyaha
(rnn) (digo yara) (rnn) (digo yara) (lng)
(sax ah) (xoog leh) (nau deen) (la soco) (xoog leh)
1 8 1 4 4 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
Waa maxay xaaladda falcelinta Fe (birta) ee HCl (hydrogen chloride) kula falgasha Fe3O4
Fe ayaa la falgala Fe3O4 deegaanka HCl
Dhacdada ka dib Fe (birta) waxay la falgashaa HCl (hydrogen chloride) waxay la falgashaa Fe3O4 (iron (ii,iii) oxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
copper koloriin bir ah bir (ii) koloriin naxaas (ii) koloriin
(D) (la soco) (la soco) (xanh lá cay)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2
Waa maxay xaaladda falcelinta Cu (naxaasta) ee FeCl3 (kloriinta birta)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa FeCl2 (iron(ii) chloride) iyo CuCl2 (naxaas(ii) chloride)?
Dhacdada ka dib Cu (naxaas) waxay la falgashaa FeCl3 (chloride iron)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga CuCl2 (naxaas (ii) chloride), oo ka muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CuCl2 (koloriinta birta)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CuCl2 (naxaas(ii) chloride) alaab ahaan?